Nahoana ny transgender no lasa fenitra vaovao ho an'ny taonjato 21 ary nanjavona ny heterosexual: Martin Vrijland
MANDROSO NY FIKAMBANANA
Nahoana ny transgender no lasa fitsipika vaovao ho an'ny taonjato 21 ary manjavona ny heterosexual
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 12 August 2019	• 22 Comments
Minoa na tsia izany fa ny lehilahy heterosexual dia saika ho faty. Tsy noho ny dingana mandeha amin'ny natiora ary tsy hateraka intsony ny lehilahy sy ny vehivavy, fa satria ny bioteknôlôjika sy ny fitaomana simika dia hanafaingana io dingana io. Ny zava-misy fa ny famokarana sperma dia refesina eran-tany dia manokana ho azy manokana, fa ny zava-misy faharoa fa io fandrefesana io dia mampiseho fihenan'ny be loatra milaza zavatra momba ny haavon'ny testosterone eo amin'ny fiaraha-monina ary noho izany dia momba ny fihenan'ny masculinity amin'ny ankapobeny. . "Teo anelanelan'ny 1973 sy 2011, nihena ny isan'ireo sela spérma miaraka amin'ny 59,3% nefa tsy misy porofo fa «fandrabahana» tao anatin'ny taona vitsivitsy izay"Mpanoratra mpanoratra avy amin'ny oniversite iraisam-pirenena maro ao amin'ny tatitra ataon'izy ireo.
Misy koa ny feo fa ny plastika ao amin'ny tontolo iainana no mifarana amin'ny lalan-drenin'ny vehivavy bevohoka ary manodinin'ny testosterone ao am-bohoka, dia mijanona ny fivoaran'ny masculinity (jereo eto).
Ny IVF dia toa ny fotoana ahafahana manova ny loharanom-povoan'ny sela mitsivalana ary ny fikarakarana ny hormonina mifandray amin'izany dia mety hampandeha ny firaisana amin'ny lalana iray. Miaraka amin'ny IUI (Intra-Uterine Insemination) dia mihetsika ao amin'ny laboratoara ireo sela spérma ary "mivantana amin'ny fotoana mety" misy fantsona mivantana ao an-kibo. Matoky tanteraka izahay amin'ireto fomba insemination ireto, fa inona no mitranga mandritra ny laboratoara? Ny ahiako dia nilaza fa ny fidiran'ny olombelona amin'ny fiterahana voajanahary dia namorona ny habaka hananganana fipoahana eo amin'ny isan'ny olona manana firaisana ara-nofo ho an'ny firaisana ara-nofo ary noho ny fampitomboana ny fisavoritahana momba ny lahy sy ny vavy. Izany dia ankoatry ny fiantraikany simika amin'ny plastika ao amin'ny tontolo iainana ary ankoatra ny mety hisian ny vaksiny ho fitaomana.
Ny politika dia efa mialoha ny mozika ary mametraka ny fifandirana amin'ny transgender sy ny fitovian'ny lahy sy ny vavy ny fandaharana, hany ka ny ankizy any amin'ny sekoly ambaratonga voalohany, ohatra, dia mahazo fanabeazana momba ny firaisana ary mianatra fa ny lahy sy ny vavy dia tsy voatery voafaritry ny fiterahana. fa mbola afaka misafidy ny firanany izy ireo.
Raha mihoatra ny efapolo mahery ianao dia mety efa nahatsikaritra, toa ahy ihany koa, fa mihamaro ny Ellie Lust na i Ellen DeGeneres (izay misy anarana) karazana vehivavy mandehandeha noho ny tamin'ny lasa, fa koa ny ankizilahy an-dehilahy maro kokoa, ohatra. Mazava ho azy: tsy midika hoe manafintohina na manala baraka izany aho fa miresaka zavatra momba ny toetrany fotsiny. Ireo toetra ara-batana ireo dia miharihary kokoa na lahy na vavy izay am-polony taona lasa izay ary toa mihena hatrany ireo tsy fitoviana ireo.
Manontany tena aho indraindray raha mpanolotsaina taloha ny filankevitra momba ny fahasalamana sy ny genetika Ronald Plasterk dia nandray anjara lehibe tamin'ity fizotran-jaza hita maso tsy miandalana ity. Ny tesisiko dia ny hoe miatrika fizotran'ny saina ny fikaonan'ny lahy sy ny vavy, satria mandeha amin'ny tanjona efa nomanina hatrizay isika, izay tandindona avana, ho tandindona mazava, dia manome porofo mafy fa marina aho.
Raha ny marina, eo afovoan'ny vondron'olona LGBTI ny avana dia io vondrom-piarahamonina io izay amporisihina mafy ao amin'ny Gay Parade Amsterdam taloha, izay tato anatin'ny taona vitsy dia novana anarana tamin'ny mavokely ho an'ny avana ary avy amin'ny 'Gay Parade' ka hatramin'ny 'Pride'. Hitantsika ihany koa ny fampielezana avana marobe amin'ireo haino aman-jery eo ambanin'ny saron-teny hoe "fitoviana" na "zon'olombelona". Izany rehetra izany dia azo alaina amin'ny haingon-dobo filatsahana avana, ny lakana an-tongotra an-tongotra, ny motera afo amin'ny avana, ny tobin-tsolika ary ny sisa. Ny avana dia toa famantarana ny 'ny loko rehetra mitovy aminy'; farafaharatsiny hoe ahoana no nitondrana azy. Hevitra fa tsy maninona ny loko sy ny filanao ara-nofo ary ny olona rehetra dia mitovy. Ny hevitra lalindalina kosa dia misy ifandraisany amin'ny tantaran'ny Baiboly manoloana ny safo-drano sy ny famongorana ny olombelona taloha. Misy tantara momba ny tondra-drano be dia be dia hita ao amin'ny saika ny kolontsaina taloha eran-tany.
Ny avana dia tandindona ny namoronan'Andriamanitra ny Baiboly. Ny fanadihadiako eto amin'ny tranokala dia niteraka an'Andriamanitry ny Baiboly ary Andriamanitry ny fivavahana hafa no tena mpanorina ny simisma dualistic izay iainantsika (hitantsika). Mety ho hafahafa izany aminao, saingy raha nandinika ireo lahatsoratra hatramin'ny herinandro lasa ianao na mandehana fotsiny ny menio ao ambanin'ny lohateny 'ny simulationizy rehetra dia lasa mazava kokoa (ao anatin'izany amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny siansa).
Ny tantaran'ny famoronana, ny teoria momba ny fivoarana sy ny tantara araka ny fantatsika dia afaka mahatakatra tanteraka ny maodely simulasi raha takatsika fa afaka manao fandaharana simulasi ianao avy amin'ny a to z ao anaty tantara iray. Raha mpanamboatra kilalao manorina lalao an-tserasera maro, dia misy tantara ihany koa. Mety ho tantara an-tapitrisany izany izay "tena misy" rehefa manomboka milalao ny lalao ianao. Ny famoronana fahasamihafana misy andro aman'alina, rivotra, tany, biby, olona, ​​mifanaraka tsara ihany koa amin'ny hevitra hananganana simulasi. Ny bang lehibe irery no hany fanazavana 'avy amin'ny haavon'ny lalao' ho an'ny fanombohan'ny lalao. Ka raha miresaka momba ny tondra-drano lehibe izay nanalasan'Andriamanitra ny olombelona sy ny fiara iray izay nitahian'olombelona ny 1 ny ADN rehetra, izany no tokony hilazana, mba hamerenany indray, dia efa ho avy indray izany. Fantatsika rehetra fa ny avana no tandindona an'io tondra-drano lehibe io.
Ny avana, araka ny tokony ho izy, tandindona hanesorana ny «zavaboary taloha» sy ny maha-olombelona tahaka ny fanaovana sakany. Efa eo am-panombohana vaovao toy izany koa isika izao. Ny mpivavaka (Kristiana, fa koa ny Silamo) dia mieritreritra fa ny transgenderism, izay ho hitantsika ankehitriny eo ambany sainanan'ny avana, dia tandindon'i Baphomet (izay marina) ary noho izany ho an'i Satana (izay tsy marina). Tsy maintsy hazava io tsy fahazoana io. Baphomet, ilay bisexual (hermaphrodite) osy dia tsy tandindon'i Satana fa mariky an'i Lucifer. Hasaina iantsoana an'i Andriamanitra i Lucifera taorian'ny ady farany 3 farany ho avy amin'ny ady lehibe ivavahan'ny fivavahana rehetra, izay mety hitoetra eto Jerosalema amin'izay. Lucifer dia (araka ny hevitro) no nanorina io simika io ary azo faritana hoe mpamorona io simulation dualistic io, izay ahitana ny fifanoheran'ireo fivavahana sy ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny politika ary ny lafiny rehetra amin'ny fiaraha-monina hafa dia manompo ny maodely dualistican'ity simulasi ity. Ilay Andriamanitra - Satana modely (dualism) noho izany dia i Losifera amin'ny fitenenana ny tsara sy ny ratsy; sahala amin'ny fotokevitra kristiana sy anti-Christ.
Eto am-bolana isika izao vao hamonoana ny tapany farany amin'ny soratra tokony ho ekena amin'ireo fivavahana lehibe. Nanomboka tamin'ny Genesisy 1 ny fanombohan'ny script: 27:
Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy; lahy sy vavy no namoronany azy.
Efa eo am-pihavanan'ny "tondra-drano lehibe" vaovao, izay hanesorana ny olombelona taloha. Efa alina izao isika no tsy hahitana ilay lehilahy sy ilay vehivavy. Mandeha mankany amin'ny faran'ny script isika, izay tokony hitarika dualism ho any amin'ny lalana irina, toy ny tsanganana miangona sy minus bateria miteraka arika mivantana. Tonga ny fotoana izay hampifangaroana ny dualism ao anaty vatana, ka ny fikorontanana sy ny fihetseham-po amin'ny fifandraisana lahy sy vavy dia hitranga ao anaty saina iray. Mankany amin'ny olombelona hermaphrodite (bisexual) isika, ho mariky ny fahatanterahan'ny script, izay iorenan'ny zanak'olombelona ny lalàn'ny safidy malalaka nifarana tamin'ny lozisialy dualisticia ary nanaiky an-tsitrapo ny script (na dia jamba noho ny fitaka sy fitaka aza). Ka mandehana any amin'ny maha-olombelona 'tsy fehin-kevitra' (bisexual) ho marika ho an'ny mpanorina ity simulation ity: Lucifer. Ilay mpanorina an'io simika io dia efa nanala ny maha-olombelona (amin'ny ampahany amin'ny dikan-dalao lalao lehibe) ary mamono ny lehilahy ho hevitra amin'ny maha-lehilahy. Izany no mahatonga ny avana ho tandindon'ny fiarahamonina LGBTI.
Vao manomboka izany, satria ny "zavaboary" rehetra (na ny simulation araka ny ahalalantsika azy) koa no hofongorana. Tsy zava-poana ny hoe alibi ny tontolo iainana amin'ny fametrahana ny olombelona amin'ny lafiny ara-bola (amin'ny alàlan'ny hetra) ary mandritra izany fotoana izany dia mitohy hatrany ny fandringanana ny tany. Atao tsy azo ihodivirana ny tany, ka ny olombelona dia vonona amin'ny foto-kevitra 'lanitra vaovao sy tany vaovao' avy amin'ireo fivavahana. Ny fanimbana ny fahasalamana sy ny tontolo iainana dia tsy maintsy hitaona ny olombelona (ankoatry ny fakam-panahy ny planeta mety ho lavitra) hanaraka ny lalan'ny transhumanization. Amin'ny taona ho avy dia tsy hiova ho olona transgender ihany isika, fa ho lasa androids ihany koa. Ho fanampin'izay, ireo olana toy ny famahana ny Alzheimer sy ny dementia, fa koa ny fanoloana taova na ny fahitana ny jamba mahita indray, no voalohany nahatonga ny fandrosoana ara-teknolojika mifandray. in ity lahatsoratra ity Nomeko fahatsapana ny zava-misy ankehitriny ary hahita ny fampisehoana ny orinasa Neonink Elon Musk ianao, avy amin'izay ahitanareo fa tsy lavitra ny tokonam-baravaran'ny fitambaran'ny olombelona sy ny AI isika.
Ny olombelona (ny avatar olombelona, ​​izay tena aingam-panahy avy am-boalohany izay ivelan'ny an'ity simulasi ity) dia hametraka io "famoronana" io ho transhuman transgender, miaraka amin'ny tanjona farany tsy ho voataonan'ny Luciferian AI. Ity dingana ity dia hitranga amin'ny lafiny iray amin'ny alàlan'ny fakam-panahy (manala ny aretina, mamaha ny fahajambana, miato ny fizotran'ny fahanterana) ary amin'ny lafiny iray, amin'ny alàlan'ny fandringanana ny tany sy ny kalitaony.
Ny avatar anti-kristy, tsy misy toa ny messiah avatar (ampahany amin'ny script dualistic), ihany no ho fampidirana an'io tsangambato io mba hampitaona ny olona mankany amin'ny 'lanitra vaovao sy ny tany vaovao' ary mankany amin'ny 'fiainana mandrakizay' ( ny tsy fahafatesan'ny transhumanism). Mianjera amina toerana daholo izy io raha vao hitanao. Ity dingana ity dia heverina fa hatao mandritra ny am-polotaona 2 ho avy (satria mifanaraka amin'ny andikan-tenin'ny faminaniana sy ny fitomboan'ny teknolojia ara-teknolojia) ary noho izany dia apetraka daholo ny fomba rehetra hanatanterahana ilay lehilahy hermaphrodite ao anatin'ny taranaka iray. Mety hanana anjara toerana lehibe amin'ity vaksiny ity ny fialan-tsasatra ary ho hitantsika faingana tokoa fa ny lalàna ny vaksiny dia ho takian'ny lalàna manerantany. Izany rehetra izany dia mazava ho azy miaraka amin'ny teknolojia manana fahalalana ny mombamomba ny sela manta amin'ny genome olombelona, ​​fa ny ahiahy amiko dia ny hermaphrodites efa manodidina antsika ary efa vonona ny teknolojia hanatratrarana izany amin'ny alàlan'ny fanovana genetika.
Vakio ity lahatsoratra ity indray mahita ny fomba tian'ny governemanta hanana ny ADN ny tsirairay ao anaty tranokala ary hahita ity lahatsoratra ity izay fomba izay ampiasaina handrisihana ny lalàna fanaovana vaksiny ho an'ny besinimaro. in ity lahatsoratra ity Nohazavaiko ny fomba hanakatonana ny tambajotra 5G hanafaingana ny transhumanization olombelona. Ny teknolojia rehetra dia eo mba hahatsapa ny fandaharam-potoana. Fotoana izay hidiranao tsara an'izany ary tsy mieritreritra intsony fa tsy handeha haingana izany. Nahoana? Satria fandaharana ho an'ny fanandevozana farany izany ary vao mainka aza ianao lavitry ny tany am-boalohany.
Lisitry ny rohy loharano: businessinsider.com, shownieuws.nl
Moa ve ny fampianarana momba ny firaisana ankafizin'ny LGBTI momba ny firaisana amin'ny ankizy?
Ny antony mahatonga ny lisansa ho an'ny lisansa, ny filalaovana sikidy ary ny transgederisma ho lasa lavitra
Ny fiovana lehibe: Martin Vrijland dia mitsangana ho an'ny vondron'olona LGBTI!
Ny peratra amin'ny transducteur: maninona izany?
Ny avana, ny 'I Am' amin'ny 'I Amsterdam', ny LGBTI sy ny fifanekena eo amin'ny 3
Tags: baphomet, Featured, lahy sy ny vavy, hermaphrodite, Losifera, tsy miandany, vaovao, fenitra, Plasterk, fampielezan-kevitra, avana, Ronald, satana, transgender, transhumanism
IBERI nanoratra hoe:
12 Aogositra 2019 ao amin'ny 09: 43
Lahatsoratra tsara amin'ny resaka atiny ary tena fanabeazana. Ny tenako manokana dia miahiahy fa ny Andriamanitra (Elohim na andriamanitra) ao amin'ny Baiboly, ankoatry ny sasany dia pretra siantifika (asan'ny maizina) ary ny tenany mihitsy aza dia nanodinkodin'olombelona hamonoana eto an-tany izay tafavoaka tamin'ny fahalasan'ny sivilizasiona. Mino aho fa tsy tokony hihevitra isika fa Andriamanitra dia zavamiaina transcendent be vola. Izahay dia angamba ny zavaboariny namolavola azy ireo ary izy ireo no mitantana an'io. Ireo andriamanitra ireo dia samy manao izay tiany.
Heveriko fa velona fotsiny Atoa Epstein ary misy zavatra roa ny fahitana manontolo. Mba hahafahanao manala ireo tatitra avy amin'ireo haino aman-jery mifehy azy voafidy ho sandoka 'voaporofo' ary hanamarihana ny mpomba azy rehetra dia mety ho mpampihorohoro sy olona mahatsikaiky. Ary tokoa ny manandoka ny foto-kevitry ny 'pedophilia' ao amin'ny olona mba hahatonga ny habituation sy ny fanekena ho toy ny 'firaisana ara-nofo' ara-nofo.
Patricia van Oosten nanoratra hoe:
12 Aogositra 2019 ao amin'ny 11: 32
Misaotra indray noho ity lahatsoratra tsara ity!
Mampifandray tsara ny ataonao ianao raha oharina amin'ny ranonorana sy tandindon'ny fampandehanana an'i Noà. Karazana marim-pototra ho an'ny 'zava-misy marina' tian'ny fikambanana hampihatra izany zavatra ratsy izany.
Ao amin'ny fb dia efa maro ny andiany izay nahita fa vao avy nisesy ny 'tondra-drano'; manodidina ny 1850. Fantatra amin'ny anarana hoe Muddfloods; izay nananganana izao tontolo izao tsara tarehy tamin'ny fampiasana angovo maimaim-poana sy ny fitsipi-pitondran-tena avo lenta; napetraka tao anaty fotaka lalina tany anaty fitaovam-piadiana mahery vaika. Asa goavana izany; mandrava ny zavatra rehetra; ady, kamboty dia feno ankizy tsy maintsy manorina zavatra any an-toeran-kafa. Apetraho eo amin'ny orinasa mpamokatra solika, lasantsy ary herinaratra ny tsirairay, fa ny elite kosa dia mbola maka izany avy amin'ny 'aether' nolavin'ny siansa Mafia.
Noho izany dia nanjary nanan-karena sy natanjaka izy ireo, nanao sonia ny fifanarahana rehetra hany ka lasa andevo daholo ny rehetra, miaraka amin'ireo ivon-tanany 3 any Vatican City (nanomboka tany Italia daholo izy ireo niaraka tamin'ny banky voalohany "George" tany Genoa), London City sy Washington DC, talohan'ny nangalariny ny zavatra rehetra tany aloha. ao anatin'izany ny Templars, amin'ny alàlan'ny Zezoita. Ireo 3 ireo dia hafindra any amin'ny fireneny; Israhel. Ny Trinite masina ao amin'ny…
Tantara saro-bidy izy io, fa ny tanjona dia ny fanapahana an'izao tontolo izao hatrany am-piandohana. Ary efa nalaza nandritra ny fotoana ela ny teknolojia, fa izany dia ampiharina amin'ny an-tsipiriany.
Mampatahotra izany rehefa manaraka ohatra Sir (!) Asa Martin Rees; astrofizisista anglisy izay nampianatra tsanganana iray aorian'ny iray amin'ireo oniversite lehibe indrindra. Tsy misy na inona na inona amin'izao fotoana izao no ampianarina ny eterika sy ny fananana manodikodina ny saha elektromagnetika. Natao ho an'ny kolikoly sy ny mainty hoditra ihany izany (noho ny fanararaotana zaza).
Mangina izy mikasika ny fahalotoantsika, hany ka lasa 'loza ny taratra' cosmic 'ary mila mandray andraikitra manohitra izany isika. Ary toy izany koa ireo karazana tatitra siantifika diso avo lenta rehetra izay napetraka eran'izao tontolo izao, izay tokony 'handraisan'ny politika' ny monisipaly azy. Tahaka izany, toa toy ny clone Tesla i Rees ary mitovy amin'ny William Hare ilay mpamono azy io, izay tany Edinburgh tamin'izany fotoana izany, dia nanome ny faty sy ny zaza maty ny mpitsabo mba hanaovana fanadihadiana. Ny fizarana ambanin'ny tany ao Edinburgh dia mpizahatany ankehitriny. Nandeha ny tantara fa i Hare, toa an'i Epstein amin'izao fotoana izao dia efa navotsotry ny polisy avy ao amin'ny fonja .... (miala tsiny fa fitsangantsanganana avy amiko)
Momba an'izany zavatra nataon'i Lucifera sy Kristy izany; I Lucifera dia midika ho antony sy fiantraikany; ny antony mahatonga ny saina ao an-tsaina. Ny reny no azer izay mahatonga ny saina maneran-tany (toa ny sarimihetsika eo amin'ny efijery mihetsika). Ny zaza no resahinao, i Losifera izay mamorona olon-droa ao anaty lalàna raikitra, ny simulation. Io renim-pianakaviana io dia tsy tavela ary ampiasaina 'mangingina' amin'ny kilalao sy fitaovam-piadiana elektronika, haizin-drivotra (Haarp) sns
Tamin'ity herinandro ity dia nisy lahatsoratra iray momba ny psikology; izay ahitan'ny mpahay siansa fa tsy maintsy misy saina iraisana izay tsy miankina amin'ny ati-doha. Raha ny marina, ny fiasan'ny atidoha dia manimba azy io. Izany no mahatonga ny zava-mahadomelina izay mampiorina ny fiasan'ny atidoha dia manintona tokoa, satria avy eo dia tonga avy amin'ny voninahitra ilay saina manontolo. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/think-act-be/201908/how-is-consciousness-related-the-brain?fbclid=IwAR0SIUfeJTdELBScEKSQvzosfz_r6z7E64nrueSpp-jRNBsCFqMgwi5HZBM
Fa ny sodomy koa, izay ampihain'ny 'Luciferians', efa miaraka amin'ny ankizy kely dia miteraka fikosoham-bary izay atidoha; ny glandillas de pine dia mamoaka DMT vokatr'izany, raha misy koa ny trauma mavesatra. Amin'ny alàlan'ny fanoratana azy amin'ny feo manindrona, sns, izy ireo dia afaka mifehy ny saina tsy misy olona.
Ny 'avonavon'ny pelaka' amin'izao fotoana izao dia manana 'avonavona Kanal' izay mirakitra ny teny hoe 'anal'. Ary K ao Kanaal (artifisialy sns) na 'C' ho an'ny laoka, ny akoho, na inona izany.
Ny fahasamihafana lehibe dia ny fampahavitrihana ny saina manontolo, na raha manosika anao hisaina fisintahana ianao, izay tena manaitaitra ny hemisie ankavia, toy ny ao AI ary amin'ny fampianarana ankehitriny, ny fampiasana fanafody ary ny fiaraha-monina.
Efa naheno tatitra maro aho ary niaina fa ny fampidirana ny saina manontolo dia ny code KRISTY; Noho izany amin'ny fanaovan-javatra an-tsakany sy an-davany ireo olona dia manafaka amin'ny kaody trauma sy ny fifehezana ny saina.
Midika izany fa nisy fandaharana iray nampidirina tao an-tsaina Luciferian Universal, izay manakana sy manasitrana rehefa voafetrin'ny saina-miasa ianao. Na ny sela misy homamiadana.
Amin'ny teny hafa; fa i Lucifer amin'ny saina manontolo dia efa nosoloina (avy amin'ny tany am-boalohany) nataon'i Kristy-saina; izay manome antoka fa hanohy hahafantatra sy hanetsika ny orinao ianao, na eo aza izany.
Ny tanjon'ireo Lucifiana (Sabbateans, Frankinists, Illuminati) dia ny mamorona indray ilay Lucifana taloha ary noho izany hanjaka sy manodinkodina ny simia. Avy amin'izany fanoharana izany ny vahoaka 'jiosy' no olom-boafidy vaovao. Ny ambiny dia mety ho andevo robot.
Ahoana no fomba anaovan'izy ireo izany rehefa nanoratra an'i Kristy i Lucifer?
Misy lafiny iray hafa amin'i Lucifer, ny lafiny fanodinana izay ahafahan'ny fahalalahana mamita ny lalany, raha toa ka tsy misy fahatsiarovan'i Kristy azy. Tokony hanao izany ny tenany 'olombelona' ankehitriny. Voatsindroka ny fandaharana, fa ny olombelona dia tokony hampihatra izany amin'ny fomba an-tsaina.
Ny lafiny fanodikodinana an'i Lucifer, na ny roa, dia tsy Kristy, satria izy no teo ambonin'izy io.
Izy dia antsoina hoe Ahriman; toe-tsaina amin'ny teknolojia miaraka amin'ny tanjon'ny fangalarana ireo zavaboary niandohany ary ampidiriny ao amin'ny fanjakany. Raha atao teny hafa, Satana. Izany no ilazanao sy manazava ny sainao rehetra.
Noho izany dia tian'izy ireo ny hanahaka ny fahaizan'ny fandaharan'i Kristy amin'ny endriny ara-nofo; toy ny hermaphrodite sy transgender. Midika izany fa tapaka tanteraka avy amin'ny tany am-boalohany, ary tsy miaina hetaheta intsony.
Ary marina koa izany na aiza na aiza ankehitriny no ampidirina ny lalàn'i Noaide, izay mandeha mavitrika raha vao manomboka mihatra ny 'martial law'. Ireo lalàna ireo no manambara, ary ireo dia samy nosoniavin'ny filoham-pirenena rehetra, ary ny farany no Trump; fa izay mino an'i Kristy dia heverina ho mpanompo sampy ary hotapahin-doha !!
Ny tiako lazaina. Ataovy tsara ho anao ny tenanao. Mampiseho izany bebe kokoa ny zavatra rehetra voatendry.
Nihevitra aho fa hamaly an'io olana io fotsiny aho satria mihevitra aho fa hitondra bebe kokoa amin'ny fikarohana ny fivoahana izany.
Kristy dia milaza any amin'ny toerana iray ao amin'io Baiboly io; "Tsy misy olona mankany amin'ny ray (ny tany am-boalohany) afa-tsy amin'ny alalako." Izy no tena nolazainy; raha tsy izany dia very fotsiny ianao dia voafitaka. Tsy niantso fombafomba, dogmatika na fanompoam-pivavahana tamin'Andriamanitra akory izy, fa mba hisian'ny fahatsiarovan-tena tanteraka (mifototra amin'ny fo, misy sela marobe kokoa noho ny ao amin'ny atidoha); ary ho fantatry ny simulation ary tsy hanaiky azy marina, fa ny hanantena sy hanaiky ny fahatsoram-pomba izay manja azy (ilay Fanjakana). Izay ihany no azo atao raha afaka mizaha ny tenanao ivelan'ny simulation ianao. Marina sy eo amin'ny dingan'ny ho faty.
Marina tokoa fa be dia be ny zombies efa mivezivezy izay tsy afaka manao an'izany mihitsy, satria efa vokatra avy amin'ny fanodikodinana biolojika izy ireo ary noho izany dia tsy hahita fahitana tany am-boalohany intsony, ary tsy manana fahalianana na inona na inona amin'ny fandinihan-tena. Afaka mianatra sy mandika ihany izy ireo. Hafa mihitsy ny mason'izy ireo. Tsy hitany ny fianarany. Ny fisaraham-panambadiana amin'izay dia ho momba izany; ireo izay tsy manana fanahy intsony dia miara-miasa amin'ny Ahrimanic AI. Ny hafa dia afaka mamolavola ny fandaharan'i Kristy.
Amin'ny alàlan'ny fisaintsainana sy ny fo fo ho mpitari-dalana. Rehefa misaintsaina dia afaka miala sasatra ny programa (projet eo amin'ny efijery sarimihetsika) ary hosoloana ny (Christ) Heart. Ilay Original.
Misaotra indray, misaotra betsaka!
12 Aogositra 2019 ao amin'ny 11: 41
Azafady, azafady: ny fampanantenam-pinoana momba ny 'lanitra vaovao sy tany vaovao' dia azo fenoina amin'ny alàlan'ny fanaovana simulation (fanaovana simika amin'izao fotoana izao). Azonao atao ihany koa ny mandefa mora foana ilay olona nomerika "beam me up Scotty" ho any "planeta mahavariana" (ao anatin'ny simulasi ankehitriny). Izany no antony ahitantsika ny tatitra be dia be amin'ny vaovao avy amin'ny teleskopika NASA izay nahita planeta mety mbola azo tanterahina indray, ary izany no antony te-hidiran'ny Elon Musk's SpaceX mankany Mars.
Zonnetje nanoratra hoe:
12 Aogositra 2019 ao amin'ny 13: 43
Firifiry ny olona transgender tena misy any Holandy raha oharina amin'ireo olona tsy transgender, ary miankina amin'ny vondron'olona iray ihany ve izany? Misy ifandraisany ve ny famonoana voajanahary sy ny transgender?
Iza no mahalala an'io?
Nasa sns dia mety tsara ihany koa hanatsarana ny fitehirizam-bolan'ny 'elite' mpifindra monina.
Mihevitra ny mponina amin'ny ankapobeny fa tsara ny zava-drehetra., Mpanompo tonga lafatra.
Nahoana ianao no te hahalala an'izany? nanoratra hoe:
12 Aogositra 2019 ao amin'ny 23: 41
13 Aogositra 2019 ao amin'ny 10: 28
Hitako fa nanomboka tamin'ny 2015 ka hatramin'ny faran'ny 2017 dia nitombo avo roa heny ny isan'ny transsexuals raha oharina tamin'ny vanim-potoana teo aloha ho an'ny 2015. Nahatsara ara-bola hatramin'ny 2015 ve lasa transsexual? Sambatra ve ny dokotera? Vanim-potoana fahalalàna lehibe momba ny transsexuals angamba? Ny antontan'isa koa dia tsy mampiseho ny toe-tsain'ireo olona nanjary transsexual. Ratsy loatra. Amin'ny lafiny iray, misy lesoka fanampiny maro ao amin'ny antontan'isa CBS? Marina ve ny zava-misy ifotony miaraka amin'ny tatitra an'ny CBS?
12 Aogositra 2019 ao amin'ny 23: 49
Fampidirina fotsiny amin'ilay rohy izay nametraka ny Birao foiben'ny antontan'isa:
be ny lainga be
ary misy antontanisa ...
12 Aogositra 2019 ao amin'ny 13: 17
Ny fantsom-panazavana dia tsy azo tehirizina ho an'ny olon-tsotra ihany.
Renim-pianakaviana mivonto (mbola) ary ray (mbola) miaraka amin'ny telefaona entin'ny fihenjanana
ho resin'ny fandrosoana ara-teknika rehetra. (mamaky voka-dratsy manimba ny olombelona, ​​zavamaniry ary zavamaniry ary biby)
Miaraka amin'ny pilina pilalotra (depri) ary manamboatra finday ao am-paosinao,
12 Aogositra 2019 ao amin'ny 15: 16
Tena fantsika -> Lahatsoratra lohateny .. Feno, satria ho an'ny rehetra dia zava-dehibe izany.
Raha mandritra ity androm-piainana ity dia tsy hitanao fa fisalasalana daholo ny zava-drehetra (iza no tena misy anao?) Ary mampiray ny tenanao amin'ity fantsom-piainana (siansa ara-materialy ity ianao) dia hoverina miverina indray miaraka amin'ny fiantraikany rehetra ianao (vaksiny tsy maintsy atao na kitapo iray, na avy eo ianao "de Sjaak";)
Ianao ve mila ny pilina manga na ny pilina mena?
Valiny: Na izany aza!
Aza atao tsy miandany, aza atao Choice-kely kokoa, aza mamono ny bateria ary vonjeo ny herinao (fa tsy omena!).
Avy eo mety afaka manaraka ny lalana ety ianao ..
(Ho an'ny fahalalahana ..;)
13 Aogositra 2019 ao amin'ny 01: 58
Indraindray ny famakiana ireo lahatsoratra ireo dia manafintohina ahy raha handeha haingana be tokoa izy rehetra. Avy eo hijery ny fampahalalana bebe kokoa ao amin'ny Google aho.
Miaraka amin'ity lahatsoratra ity dia nanontany tena aho hoe inona no tena ampianarin'ny ankizy ankehitriny ao amin'ny sekoly ambaratonga voalohany. Hita tokoa fa nanomboka tamin'ny 2012 dia voatery nanolotra fampianarana momba ny firaisana amin'ny sekoly ambaratonga voalohany. Nisy mpitari-dalana Eoropeana iray natsangana ho an'ny 2010 nataon'ny World Health Organisation, birao ho an'ny Eropa.
Rehefa avy namaky ny tarika fianarana avy amin'ny pejy 38 aho dia afaka milaza fotsiny fa ireto no tena fanatanterahan'i Lenin tenin'i: "omeo taranaka tanora iray aho, ary hanova izao tontolo izao aho."
Fampandrenesana Spoiler: ny OMS dia mamaritra ao amin'ny matrix nianatra fa tsy maintsy manomboka amin'ny fampianarana sokajy taona 0-4 ny fanabeazana firaisana ...
guppy nanoratra hoe:
13 Aogositra 2019 ao amin'ny 07: 47
Tsy zava-misy akory no ilazan'ny osy fa 'Ny lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra'.
Ilay namorona ny fotoana, fanemorana ny hazavana. Hitako ny fombafomba sy fampianarana roa samy hafa eo amin'ny fivavahana rehetra fa amin'ny kolontsaina taloha toa ny kolontsaina Maori. Israel = Isis (volana) + Ra (masoandro na zanakalahy) = Elohim = herinaratra.
Azo atao koa ny tsy mamela ny hanao an'ity tontolo ity ho lasa be loatra (iadian-keviny) toa an'i Bill Gates sy Elon Musk ary ireo naman'izy ireo nomerika rehetra. Azo heverina fa ity tontolo ity dia ho setra mafy rehefa tazomina hiaina ny tontolo dualistic. Raha Lucuel mifamadika ary manana tafika tsara sy ratsy izy (Anjely sy demonia) iza no tokony hamahana? Efa an-tapitrisany talohan'izay no nisy an'izao tontolo izao, ary niraikitra tamin'ny ADN ny olombelona ary nanjaitra ny zava-drehetra sy ara-bakiteny. Very i fifehezan'i Lucifer ary namerina ny zava-drehetra. Ny hany azony atao dia miverina amin'ny famoronana fahalalany ihany.
Ekeko ihany koa fa ny Mindsupply dia fomba iray ihany ary izany dia ny tsy fitanisan-tena. Tsy manga, tsy mena, fa lalana tery eo anelanelan'ny.
Tena lahatsoratra tsara manantena ny mpamaky hahatakatra ny maha-zava-dehibe an'io lahatsoratra io!
13 Aogositra 2019 ao amin'ny 09: 19
Ny fomba tokana dia tsy fahatomombanana? Io dia momba ny tsy fitanisan-tena momba ny lahy sy ny vavy. Ny teny hoe "tsy fitanilana" dia teny voarindra, fa amin'ny heviny iray marina, ny fanoherana dia manamafy ny fitoniana. Raha ny hevitro dia tsy tokony hafangaro amin'ny tsy fahatokisana ny fitiavan-tena.
Ny fomba tokana dia ny mitadidy fa mandray anjara amina simulation ianao (satria mpitazana ao anaty simulation virus Virifer).
Avy eo dia ho hitanao fa maharesy otrik'aretina ianao fa tsy amin'ny haavon'ny lalao. Ny momba ny fahatsiarovana hoe iza ianao: endrika famoronana fahatsiarovan-tena izay tsy ambany noho i Lucifer. Fotoana tokony hampijanonana ny tsimokaretina amin'ny ambaratongan'ny fahatsiarovan-tena. Izany dia mitaky tsy fahatokisana sy hanampiana ny olona (ireo endrika fahatsiarovan-tena miaina ity simulation virus) mba hahatadidy ny toe-javatra misy azy ireo.
13 Aogositra 2019 ao amin'ny 10: 35
Ny tsy momba ny atsy na ny aroa dia tsy midika hoe 'tsy momba ny atsy na ny lahy sy ny vavy' (izany hoe fampitahana ny paoma miaraka amin'ny voanjo), ary tsy midika koa hoe passivity. Ambonin'izany, tsy midika akory izany fa tsy manana ny fiaraha-miory na ny fihetseham-po ianao (mifanohitra amin'izany). Raha mampihatra ny atsy na ny aroa ianao dia mitazona ireo toetra ireo hatrany amin'ny farany fa tsy mitsara na mifidy mazava.
Raha tena tsara 'ianao, dia mamahana ny' ratsy 'ary ny mifamadika amin'izany.
Ny miliara 1 dia miteraka olona maro tsy manan-kialofana / mahantra ary amin'ny zavatra tsara rehetra dia misy zava-dratsy mitranga any an-toeran-kafa .. Ho foana izany fifandanjana izany .. Ireo no fitsipika sy lalàn'i Lucifer (ditalisa). Raha tsy mandray anjara dia manana an'i Losifera miaraka amin'ireo baolina ianao. Izany dia tsy misy ifandraisany amin'ny fihenan-kevitra (mifanohitra amin'izany).
Tsy mora ny tsy miandany ary tsy hahomby hatrany .. Fa ny fiezahanao kosa dia hanampy anao tsy hiala amin'ny angovo anananao ary hampatanjaka anao ara-panahy izany satria mitazona ny angovo ho an'ny tenanao ianao. Mila an'izany hery izany ianao mba handresena an'i Lucifer.
Mino aho fa ny hoe 'mahafantatra' ny simulation fotsiny dia tsy ampy. Ho fanampin'izany, tsy maintsy ho (tsy maintsy atao) ianao tsy miandany ary asehoy fa tsy afaka maka ny angovo intsony ianao (satria tsy milalao intsony ..)
Ary raha alefa eto ity dia ampio ny olon-kafa hieritreritra izany ..; )
13 Aogositra 2019 ao amin'ny 10: 36
Ny tsy momba ny atsy na ny avana dia raisina amin'ny laoniny. Raha tsy avelanao ho resy lahatra ny tenanao, dia tsy miandany na amin'ny atsy na ny atsy na ny aroa ianao. Ny dikan'ny hoe aorian'ny fahafatesana dia manana valiny marina ianao hivoaka.
13 Aogositra 2019 ao amin'ny 12: 30
"... fa tsy avelan'i Lucifer hoentin'ny olona toa an'i Bill Gates, Elon Musk ary ny namany nomerika rehetra?"
Mifanohitra amin'izany, ireo olona ireo dia eo amin'ny fon'ny fizotran'ireo olona miaraka amin'ny Luciferian AI. Ireo olona ireo dia nametraka ny masobe teo amin'ny sarintanin'ny lalana mankany amin'ny Singularity (diso).
13 Aogositra 2019 ao amin'ny 19: 14
Marina fa miasa ho an'ny tafika ratsy izy ireo. Ho afaka hanangana ny zava-drehetra ve ny tafika tsara? Mena sy manga sy mainty ary fotsy.
13 Aogositra 2019 ao amin'ny 19: 22
Ankoatr'izay, dia noforonina araka ny endriny isika. Adinony ihany koa ny tena niaviany ka io no latsaka tany. Raha manaraka ny ohatra nomeny isika dia hanao toy izany koa. Ny safidy dia antsika.
Ben nanoratra hoe:
14 Aogositra 2019 ao amin'ny 07: 39
DIA HAFA AZY ARY MBOLA HISEHOANA AZY!
16 Aogositra 2019 ao amin'ny 10: 18
Mitohy mihazakazaka ny milina fampielezan-kevitra ... ary miaraka amin'ny rindrambaiko kely azonao atao ny mamorona tantara rehetra ilainao tantaraina ... mbola Freek?
19 Aogositra 2019 ao amin'ny 23: 04
Oh tsara fa hira ihany izany
leapfrog nanoratra hoe:
23 Aogositra 2019 ao amin'ny 18: 34
Tsy voafetran'ny fiantohana ara-pahasalamana ny fifehezana ny fiterahana. Ny antony omena dia tsy fangatahana fitsaboana izany. Ny fiovam-po, ny hormonina ary ny faribolana manontolo ho an'ny olona transgender dia ho tampoka toa izany. Ary mazava ho azy fa ny vaksiny sy ny famonoana olona (vehivavy pelaka). Miampy ny fitsaboana rehetra amin'ny fiterahana. Sarotra amin'ny olona sasany ny mandoa vola hikarakarana olon-kafa. Hitako fa sarotra kokoa ny mandoa an'io karazana fanelingelenana io; mivantana sy tsy mivantana satria hisy fiantraikany betsaka amin'ny fahasalamanao ary afaka miasa.
19 Oktobra 2019 ao amin'ny 09: 42
Taiza no niafaranay tamin'ny Anaran'ny Peace (Greta avy amin'ny diaper ho an'ny toetr'andro)
ary ity olona eto amin'ity horonantsary eto ambany ity avy amin'ny diapers ho an'ny Lghbt)
Misy taranaka iray, maika izy ireo.
« Namono tena tao amin'ny sela i Jeffrey Epstein (fanavaozana)
Ny avana dia misolo tena ny fivavahana mpankafy fa ny mpanohana kosa mihevitra fa miady ho an'ny 'fahasamihafana sy fahatsapan-tena' izy ireo. »
extras ho an'ny mpikambana
tamin'ny 18 Febroary 2020
Total visits: 39.626
Nisintaka ve i André Hazes satria i Bridget Maasland dia namitaka an'i Martin Vrijland?
Nopotehin'ny baomba Rosiana ny fitaovam-piadiana tiorka any Syria, nohamafisina ny toe-draharaha
Ny tsimok'aretina Corona, ny fohy fohy mankany amin'ny fanafoanana ny vola sy ny vokatra ara-toekarena manerantany
Fa maninona no tany am-boalohany
Hoentin'i Syria ve i Syria ary inona no dikan'ny fifandraisana amin'ny Etazonia, Rosia ary Iran?
Camera 2 op Nisintaka ve i André Hazes satria i Bridget Maasland dia namitaka an'i Martin Vrijland?
Martin Vrijland op Nopotehin'ny baomba Rosiana ny fitaovam-piadiana tiorka any Syria, nohamafisina ny toe-draharaha
Riffian op Hafiriana no nahitan'i Trump teo amin'ny lasabe izao fa hita maso ny famantarana voalohany amin'ny ady an-trano?
Fakafakao op Netflix 'Pandihan-tena: ahoana ny hisorohana ny fampielezana doka amin'ny valan'aretina momba ny vaksiny maneran-tany SuperHuman-2.0?
SEARCH (Google amin'ny tranokala)